श्रृंखला खतिवडाको विवाहको मिति बाहिरियो, को सँग हुदैँछ ? हेर्नुस् – Online Marg
श्रृंखला खतिवडाको विवाहको मिति बाहिरियो, को सँग हुदैँछ ? हेर्नुस्
Posted on Saturday, February 1st, 2020 6:42 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा अर्को वर्ष वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने भएकी छिन् । भ्लगर सिसन बानियाँसँग प्रेममा सम्बन्धमा रहेकी खतिवडाले आफ्नो सम्बन्ध यसअघि लुकाउँदै आएकी थिईन् । तर, मिडियामा उनीहरुलाई पछ्याउनेको संख्या बढेपछि खतिवडा र बानियाँको प्रेम सम्बन्ध लामो समयसम्म गुपचुप रहन सकेन् ।
Posted in मनोरन्जन मार्ग